रोममा मुद्रा विनिमय
यदि तपाइँ एक को उपयोग गर्न चाहनुहुन्न एटीएम, यो शहर भित्र विभिन्न स्थानहरूमा मा पैसा आदान प्रदान गर्न सम्भव छ. त्यहाँ रोम Termini नजिकै धेरै विनिमय अंक हो, रोम को मुख्य रेल स्टेशन. तथापि, हामी कासा डेल Turista सिफारिस, जो स्टेशन बाट छोटो पैदल छ.
मिलान पर्यटकहरु संभावना भ्रमण गर्न जाँदैछन् मिलान गिरजाघर, जो राम्रो पैसा विनिमय विन्दु हो. को Piazza डेल Duomo मा विनिमय खोज्न, बस एक को गिर्जाघर टाढा मिनेट. यो पनि यात्री को चेक स्वीकार गर्दछ, तपाईंले तिनीहरूलाई गर्न हुन भने.
तपाईं हाम्रो सुझाव पालना भने ब्रसेल्स मा सबै भन्दा राम्रो पैसा विनिमय स्थलहरू पत्ता तपाईं पनि लामो लिनु हुँदैन. तपाइँ दर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि एक मुद्रा विनिमय तपाइँ लाई यो मध्य मध्य बजार दर संग तुलना गरेर प्रदान गर्दछ. तथापि, समय बचत गर्न, तपाईं साथै Boulevard Adolphe अधिकतम मा DME परिवर्तन गर्न टाउको सक्छ 11.
नेदरल्यान्ड मा बैंक सामान्यतया केवल आफ्नो ग्राहकहरु पैसा विनिमय सेवाहरू प्रदान, जो पर्यटकहरुका लागि असुविधाजनक छ. जब एम्स्टर्डम मा, Damrak एवेन्यू मा परिवर्तन कार्यालयहरु को लागी हेर्नुहोस्. सबै भन्दा लोकप्रिय एक Pott परिवर्तन छ, जो तपाईं निकट पाउन सक्नुहुन्छ शाही महल.
तपाईं भियना मा यूरो आवश्यक हुनेछ. विमानस्थलको र पर्यटक स्थलहरू पैसा विनिमय स्थलहरू लागि safest विकल्प हो. तथापि, हामी सिफारिस ठाउँका एक मोडतर्फ छ, विपरीत सेन्ट. को मेट्रो स्टेशन गर्न Stephens गिरजाघर नजिक. उनीहरु यात्री चेक पनि स्वीकार गर्छन्, तपाईंले तिनीहरूलाई भने जो सुविधाजनक हुन सक्छ.
#मुद्रा विनिमय #मनी एक्सचेन्ज #traveleurope moneys बचतtips traveltips